I Chan Yu nitondra ny fiara Cosworth Proto no nandresy nandritra ny “Prorun” notanterahana teny Arivonimamo omaly tolakandro.
Fanindroany misesy izany izao i Maitre Yu no laharana voalohany; tafiditra tao amin’ny laharana faharoa kosa i Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx nitondra ny BMW M3. Teo amin’ny sokajy “Run” dia ny Volkswagen Golf “Brouette” nentin’i Andry Randriamanasoa no voalohany raha i Rija Randrianjanaka nitondra Peugeot 205 no faharoa.
FENO HIPOKA NY FONJA
Efa tena hipoka ny fonja eto Madagasikara ka laharam-pahamehana ho an’ny fanjakana ny fanorenana fonja vaovao sy fanatsarana ny efa misy, hoy ny minisitry ny fitsarana. 270 000 ankehitriny ny gadra manerana an’i Madagasikara ary 3 000 ny mpiambina fonja misahana azy ireo, isa izay tena tsy ampy. Ho an’Antanimora manokana raha 800 olona no zakany dia efa 3 000 no mifonja ao amin’izao fotoana.